Dheefta Fasaxa Lacagta leh ee Carewell - Carewell SEIU 503
Waxay kaa caawinaysaa inaad fasax ka qaadato shaqada marka aad u baahan tahay.
Dheefta oo Kooban
Dheefta Wakhtiiga Fasaxa Lacagta leh (PTO) ee Carewell SEIU 503 waxay kaa caawineysaa inaad waqti fasax ah ka qaadato shaqada markaad u baahato.
Inaad awoodo inaad fasax qaadato caafimaadkaaga oo keliya muhiim uma ahan, balse sidoo kale caafimaadka macaamiishaada. Carewell SEIU 503 waxay siisaa ilaa 40 saacadood oo ah dheefaha fasax lacag leh (PTO) sanadkiiba bixiyeyaasha daryeelka xaqa u leh.
Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay in la Ogaado
Waa inaad buuxisaa foomka W-9 si aad ugu qalanto dheefahaaga PTO. Haddii Xafiiska Maamulka Dheefaha uusan haynin faylkaaga W-9, ma heli doontid dheefta PTO.
Haddii aadan codsanin dheef sanadka la kasbaday, waxaa si toos ah laguu siin doonaa sanadka soo socda, ilaa iyo inta uu faylka W-9 kaa yaalo Xafiiska Maamulka Dheefaha. Tusaale ahaan, haddii aad shaqeysay 80 saacadood Abriil 2022, waxaa lagugu xisaabin doonaa 20 saacadood oo PTO ah Luulyo 2022. Waxaad codsan kartaa saacadahaas adiga oo soo gudbinaya foomka codsiga dheefta. Balse haddii aadan iyaga codsanin oo uu faylka inoogu jiro foomkaaga W-9, waxaad si toos ah u heli doontaa lacagta 20-ka saacadood ee PTO ee Febraayo 2023.
Ma aha mas’uuliyaddaada inaad hesho beddelkaaga marka aad fasax lacag ah ka qaadato macaamilka loo shaqeeyahaaga.
Fasaxa lacagta leh waa dakhli la canshuuri karo waana sababta aad u buuxineyso Foomka W-9. Haddii aad hesho $600 ama in ka badan oo ah dheefahaaga fasaxa lacagta leh hal sano gudaheed, waxaad ka heli doontaa Foomka 1099 Xafiiska Maamulka Dheefta. Dheefaha weli waa dakhli la canshuuri karo xitaa haddii aadan helin foomka 1099.
Waxaa soo socdo horraanta 2023! Qaab fudud oo aad ku helayso PTO-gaaga. Fadlan xaqiiji inaad ka eegto iimaylkaaga iyo boostadaada wixii faahfaahin dheeraad ah!
Hubi u-qalmitaankaaga Dheefaha PTO
Si aad isla markiiba u ogaato u qalmitaankaaga, ka jawaab dhawr su’aalood oo ku saabsan su’aalo weydiimaha u qalmitaanka.
Tag su'aalaha xog-uruurinta
Hoos ka akhri shuruudaha si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan u-qalmitaanka dheefaha Fasaxa Lacagta leh ee Carewell SEIU 503.
Si aad ugu qalanto dheefaha fasaxa lacagta leh ee Carewell SEIU 503 waa inaad:
Shaqeyso 80 ama ka badan saacadaha shaqada ee u qalmitaanka— oo sidoo kale loo yaqaan saacadaha kooxda gorgortanka — mid ka mid ah bilaha u qalmitaanka:
Si aad u kasbato 20 saacadood oo dheefaha PTO ah Febraayo, waa inaad shaqeyso 80 saacadood ama in ka badan Oktoobar, Noofembar ama Disembar ee sannadka la soo dhaafay.
Si aad u kasbato 20 saacadood oo dheefaha PTO ah Luulyo, waa inaad shaqeyso 80 saacadood ama in ka badan Maarso, Abriil ama Maajo ee isla sanadkaas.
U soo gudbi Foomka W-9 Xafiiska Maamulka Dheefaha.
Foomka W-9 (Dijital)
Saacadaha u qalmida
Marka aan ka hadalno tirada “saacadaha shaqada” waxaad u baahan tahay inaad u qalanto dheefaha Carewell, taasi waxay la macno tahay saacadaha ay bixiyaan Acumen, DHS, iyo/ama PPL iyagoo matalaya macaamiishaada.
Haddii aad qabtid su’aalo ku saabsan u qalmitaankaaga Fasaxa lacagta leh, kala xidhiidh Xafiiska Maamulka Dheefaha 844-507-7554, doorashada 3, doorashada 2 ama iimaylka ohcwtPTO@vimly.com.
Haddii aad shaqeysay tirada saacadaha loo baahan yahay si aad u kasbato dheefaha PTO, waxaad ka heli doontaa xirmad Xafiiska Maamulka Dheefaha oo ay ku jiraan cadadka dheefaha fasaxa lacagta leh ee aad haysato. Xirmadan waxa la soo diraa horraanta Febraayo iyo horraanta Luulyo.
Si aad u codsato lacag bixinta dheefahaaga PTO, soo gudbi codsiga Xirmada Dheefta PTO ee dhijitaalka ah ee hoose – tani waa sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee aad ku dalban karto dheefta PTO!
Riix halkan si aad u buuxiso Xirmada Codsiga Dheefaha PTO
Codso lacag bixinta dheefaha PTO
Waa inaad buuxisaa Foomka Codsiga Dheefta si aad u hesho dheefta PTO. Waxaad ka heli kartaa dhammaan foomamka khuseeya (Codsiga Dheefta PTO, W-9, Lacag Wareejinta Elektrooniga ah iyo foomamka Magacaabista Ka faa’iidaystaha) ee Xirmada Codsiga Dheefaha PTO ee kore.
Qaado lacag bixin
Lacagtaada waxa aad ku heli doontaa jeeg boostada laguugu soo diro ilaa aad doorato in si toos ah laguugu shubo akoonkaaga bangiga mooyee. Si aad lacagta ugu hesho sidan, si fudud u buuxi Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah oo sii jeeg maran. (Ma isticmaali kartid lacag wareejinta elektrooniga ah haddii aanad lahayn akoon bangi.) Ku qaadashada lacag bixintaada jeeg boostada guud ahaan waxay qaadataa waqti ka badan lacag wareejinta elektrooniga ah.
Foomka Lacag Wareejinta Elektrooniga ah
Dheefahan, waxaanu kugu boorinaynaa inaad buuxiso Foomka Magacaabista Ka-faa’iidaystaha si qofka aad doorato u helo lacagtaada PTO ee aadan sheegan haddii ay dhacdo geeridaada.
Jadwalka lacag bixinta
Dhammaan lacagaha waxaa loo bixiyaa sida ay u kala horreeyaan ee loo helay. Bilaha Febraayo-Maarso iyo Luulyo-Agoosto, Foomamka Codsiga Dheehaha PTO waxa lasoo diraa bishiiba mar. Foomamka la helo 20-ka bisha waxaa la soo diri doonaa lacagta dhammaadka bisha.
Dhammaan bilaha kale, Foomamka Codsiga Dheefaha PTO waxaa lagu soo diri doonaa jadwalka soo socda:
Foomamka la soo gudbiyay 5-ta bisha waxaa la soo diri doonaa lacagta 15-ka bisha.
Foomamka la soo gudbiyay inta u dhaxaysa 6-da iyo 20-ka bisha waxa la soo diri doonaa lacag Jimcaha ugu dambeeya ee bisha.
Foomamka la soo gudbiyay wixii ka danbeeya 20-ka bisha waxaa la soo diri doonaa lacagtooda 15-ka bisha soo socota.
Fadlan sug 5-10 maalmood oo shaqo ka dib marka laga shaqeeyo in lacagta ay soo gasho.
Dheefaha PTO MA wareegaan
Dheefta Fasaxa Lacagta leh looma wareejiyo sannadba sanadka ka danbeeya. Haddii aad xaq u leedahay dheefta laakiin aadan soo gudbin Foomka Codsiga Dheefta, ama aadan codsan lacagta oo dhamaystiran ee aad heli karto hal sano gudaheed, waxaad heli doontaa lacag bisha Febraayo ee sanadka soo socda. Laakin waa in aad haysatid foomka W-9 oo ku jira faylka Xafiiska Maamulka Dheefaha si aad u hesho lacag kasta.
Dheefaha Fasaxa Lacagta leh ayaa dib loo go’aamiyaa Febraayo iyo Luulyo kasta. Si aad ugu qalanto muddo kasta, waa inaad shaqeysaa 80 saacadood ama ka badan oo saacado shaqo u qalmida oo ka mid ah bilaha u qalmitaanka. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad soo gudbiso Foomka W-9 hal mar, ilaa ay jiraan isbeddelo lagu sameeyo macluumaadkaaga, sida magacaaga ama cinwaankaaga.
Macluumaadka Meesha Lagala Xidhiidho
1-844-507-7554, xulashada 3, kadib xulashada 2
Sababaha aad ula xiriiri karto Xafiiska Maamulka Dheefaha:
Codso baaqigaaga PTO (inta saacadood ee kuu hartay)
Waxaad aaminsantahay in jeegaga PTO ee aad heshay ay tahay lacag khaldan
Ma aadan helin xirmo ku saabsan u-qalmitaankaaga PTO laakiin waxaad aaminsan tahay inaad haysato
Dhammaan su’aalaha kale ee ku saabsan dheefaha Fasaxa Lacagta leh, wac 1-844-503-7348, 8 am ilaa 6 pm, Isniin-Jimce
Su’aalaha Inta Badan Laisweeydiiyo
Akhri su’aalaha guud ee ku saabsan dheefta Carewell PTO. Arag Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo wixii macluumaad dheeraad ah.
Sidee loo xisaabiyaa dheeftayda Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh?
Dheefahaaga Wakhtiga Fasaxa Lacagta leh waxa lagu go’aamiyaa iyadoo lagu salaynayo mushaharka aad qaadatay bishii ugu horaysay ee aad noqotay mid u qalmo. Daryeel bixiyeyaasha badankood tani waa $16.67 saacaddii, laga bilaabo Janaayo, 1, 2022.
Sideen ku ogaan karaa baaqigeyga dheefta PTO?
Waxaad ka heli doontaa warqad Xafiiska Maamulka Dheefaha Febraayo iyo Julaay kasta oo ay ku jirto qaddarka dheeftaada. Haddii aad codsato qayb ka mid ah dheefahaaga oo aadan garanayn waxa hadhay ee baaqigaagu yahay waxaad wici kartaa Xafiiska Maamulka Dheefaha 1-844-507-7554, ikhtiyaar 3, ikhtiyaar 2.
Maxaan u buuxinayaa Foomka Magacaabista Ka faa'iidaystaha?
Foomkan waxa uu hubinayaa in haddii ay dhacdo inaad dhimato, qofka aad dooratay inuu helo hadhaaga dheeftaada PTO ee aad kasbatay. Haddii mid ka mid ah kuwan soo socdaa run yahay, hadhaaga PTO waxa la siin doonaa qofka ku dhaxlaya
Ma dooran ka-faa’iideyste;
Qofka aad doorato inuu noqdo ka-faa’iidayste markuu dhinto adiga hortaa;
Qofka aad u doorato inuu noqdo ka-faa’iidayste aan la heli karin meesha uu jooga.
Foomka Magacaabista Ka-faa’iidaystaha ayaa la soo raaciyay Xirmada Codsiga Dheefaha PTO.
Sideen ugu heli karaa adeeg bixiyahayga daryeelka kaydinta inta lagu jiro wakhtiga fasaxa?
Ma ahan mas’uuliyadaada inaad raadiso qof ku baddela markaad qaadato fasaxa lacaga leh. Macaamilka ayaa leh mas’uuliyadda koowaad ee xulashada iyo shaqaaleysiinta bixiyayaasha. Fasaxa lacag bixinta waa in uu hore u oggolaado macaamilka, gargaarka waa in la helaa haddii loo baahdo oo macaamilka waa in uu ogeysiiyaa hay’adda ku habboon si loo oggolaado saacadaha shaqada ee beddelka ah. Mararka qaarkood macmiilku waxa uu u baahan doonaa kaalmo Laga soo bilaabo maareeyaha kiiska/wakiilka gaarka ah/iskuduwaha adeegga si loo helo bixiye ku habboon beddelka.
Miyaan u baahanahay inaan ka warbixiyo maxay maalmaha ama saacadaha aan ka qaadanayo macaamilkayga oo aan u sheego Xafiiska Maamulka Dheefaha?
Maya, uma baahnid inaad wakhtigaaga fasaxa u soo sheegto Xafiiska Maamulka Dheefaha.